Linn Ko: Root Huawei C8813
Unlock Code တောင်းရန် China ဆိုဒ်….
Unlock Code တောင်းရန် English ဆိုဒ်…
ကျွန်တော်ကတော့ကြည့်တဲ့လူတွေလွယ်အောင် English ဆိုဒ်ကနေပဲလုပ်ပြပါမယ်…
Licence Aggrement ကိုအမှန်ခြစ်ပါ။Next နှိပ်ပါ။လိုတာလေးတွေဖြည့်ရပါမယ်။ Email လိပ်စာကိုအမှန်ထည့်ပါ။မိမိထည့်တဲ့မေးလ်လိပ်စာအတွင်းသို့ Unlock Code ပြန်ပို့မှာမို့လို့ပါ။ Smart Phone ကိုရွေး ဖုန်းမော်ဒယ် ထည့်ပါ…အောက်ပုံတွင်ဆက်ကြည့်ပါ……
ဖြည့်စရာ S/N number,IMEI/MEID နဲ့ Product ID တွေကျန်ပါသေးတယ်။ S/Nnumber,
IMEI/MEID ကိုဖုန်း Battery ဖြုတ်လိုက်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်…IMEI ကို ဖုန်းခေါ်သောနေရာတွင် *#06# ရိုက်ရင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ Product ID အတွက် ဖုန်းခေါ်ဆိုသာ Key pad မှ*#*#1357946#*#*
ရင်တွေ့ပါမယ်။လိုအပ်တာတွေဖြည့်ပြီးလျှင် Submit ခလုပ်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။Email ထဲသို့ Huawei မှ Unlock code ပြန်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ချက်ချင်းလဲပို့သလိုရက်အနည်းငယ်လဲကြာတတ်ပါတယ်။ Code ရပြီဆိုရင်တော့ စလို့ရပါပြီ…
One Key Tools ယူရန်……
လိုတာတွေရပြီဆိုဆက်မယ်နော်….ဖုန်းက Usb Debug ကို ON ထားလိုက်ဦး…
USB Debug ON ဖို့ setting>>Developer Option >>Usb Debugging ပါ..အရေးကြီးတာကဖုန်းကိုကွန်ပြူတာကသိအောင် Driver သွင်းထားရပါမယ်…… ဒီမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်
ပြီးရင်ဖုန်းကိုပိတ်ပြီး စက္ကန့်အနည်းငယ်ထားပါ။ Volume Down နဲ့ Power ခလုပ် ကိုတွဲနှိပ်ပြီး LOGO ပေါ်နေရင်ကွန်ပြူတာနဲ့ချိတ်ပါ ဒေါင်းပြီးဖြည်ထားတဲ့ One Key Tool လေးကို Run လိုက်ပါ… ပြီးရင်အပေါ်ဆုံးက Bootloader button လေးနှိပ်လိုက်ပါ…
ဖုန်း Reboot ဖြစ်သွားပါမယ်…ဖုန်းလဲ Reboot မဖြစ်ရင် ADB Driver မရှိလို့ပါ….သေသေချာချာသွင်းပေးလိုက်ပါ…..ဖုန်း Reboot ပြန်တက်လာရင် Cache ရှင်းနေပါမယ်.
Unlock လုပ်လို့ပြီးပါပြီ…(သတိထားရမည်မှာ Unlock မလုပ်ခင်အရေးကြီးတာတွေ Backup ယူထားပါ…wipe cache/data အလိုလိုလုပ်ရင်သွင်းထားသမျှဒေတာကုန်ပါတယ်)
Unlock လုပ်ပြီးရင်တော့ CWM သွင်းပါမယ်….ဖုန်းကိုပိတ် Volume Down နဲ့ Power ခလုပ် ကိုတွဲနှိပ်ပါ LOGO ရပ်နေရင်ကွန်ပြူတာနဲ့ချိတ်လိုက်ပါ…..One Key Tool မှသုံးခုမြောက် Button လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ… စာလာမယ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ…..သူဟာသူဆက်သွင်းပါမယ်…အိုကေပါပြီ.CWM ထဲဝင်ဖို့ Vol up+ Power နှိပ်ဝင်ပါ…..
အမြစ်တူးမယ် (root လုပ်မယ်) ….
တခုခုဖြစ်မှာစိုးရင်တော့ CWM ကနေ Backup ယူထားလိုက်နော်….
ဒေါင်းပြီး ဖုန်း SD Card ထဲထည့်ထား ဖုန်းကိုပိတ်လိုက်ပါ……ဖုန်းမှ Vol up နဲ့ Power ခဏတွဲနှိပ်ထားပါ….CWM Recovery ထဲရောက်ပါပြီ…အဲမှာ SD လို့ပါတဲ့ စာကြောင်းလေးထဲဝင်..
ခုနကထည့်ထားတဲ့ update.zip ကိုရွေးပေး….ခဏစောင့် Complete ပြသွားရင်ဖုန်း…ကို Reboot ပေးလိုက်ပါ…Super User လေးရောက်နေတာတွေ့ရပါပြီ……
Root အတွက် Tool မှ Root Button နှိပ်ပြီး….Root လုပ်မယ် Procedure အတိုင်းလုပ်လို့ရပါသည်..သို့သော် Superuser က တရုတ် Superuser ပါ…..
Posted by Linn Ko at 11:12 AM